Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa maqaa seera kabachiisuutiin Oromiyaa keessatti seerri cabaa akka jiru ibse. | QEERROO
2. Ajajni mana murtii kabajamuu dhabuu
3. Hidhamtoota irratti reebichi raawwachuufi qabinsi isaanii farra dhala namaa akka ta’e.
4. Namoonni Sababa nama birootiif hidhamuu.
5. Hidhamtoonni sababa harkifannaafi dhibaa’ummaa ‘mana maree nageenyaa’tiin haqa dhabuu.
6. Daa’imman baatii 5 haga waggaa 10 ta’an mana hidhaa jiraachuu fi dubartoonni mana hidhaa keessatti daa’immaniifi dhukkuba waliin rakkachuu.
7. Manni hidhaa dhiphachuufi qulqullina dhabuurraa kan ka’e miidhaan hidhamtootarra ga’uu.
8. Hidhamtoonni tajaajila akka: nyaataa, dhugaatiifi yaala dhabuu.
9. Rakkoo Manni fincaaniitiin hidhamtootarra miidhaan ga’uu.
10. Hidhamtoonni dawoo seeraafi tajaajila argachuu qaban dhabuu fa’a.
Komishinichi ibsa bal’aa dhimma qabiinsa hidhamtootaa irratti baase keessatti humnoonni nageenyaa to’annoo ala ta’anii miidhaa namarraan geessisan akka to’ataman gaafateera.
Komishinichi qorannoo kana kan geggeesse buufataalee poolisii 21 qofa irratti yommuu ta’u, bakkoota kaanittis dhiittaan mirga namaa kanaa olitti akka raawwataa jiru ni hubata jennee yaanna.
Kanuma waliin, sarbama mirga namaa keessaa isa olaanaa kan ta’e lubbuun namaa dhabamuu waan ta’eef, Komishinichi dhimma hidhamtoota mana hidhaa keessaa baafamanii humnoota nageenyaa mootummaan ajjeefamaa jiranii irratti akka xiyyeeffannaa kennu dhaammanna.